Tameelay - Page 52 of 64 - Knowledge & Motivation
တကယ့်စစ်မှန်တဲ့ မေတ္တာဆိုတာ နှောင်ကြိုးတွေမပါဘူး
April 29, 2020 Tameelay 0
ကိုယ်က သူ့ကိုချစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ အကျိုးရှိအောင် လုပ်ပြီးတော့ သူ့ဆီက တစ်စုံတစ်ခု ပြန်ရဖို့အရေးကို လုံး၀ မျှော်လင့်ချက်မထားဘူး။ တချို့ကတော့လည်း သူတစ်ပါးအတွက် အနစ်နာခံပါတယ် ဆိုပြီးတော့ သူတပါးရဲ့ဘဝကို အပိုင်စီးထားတာတွေ ရှိတယ်။ သတိထားကြည့်ရင် တွေ့လိမ့်မယ်။ ” ငါ နင်တို့အတွက် အနစ်နာခံရတာ၊ နင်တို့ကို ကယ်တင်ထားရတာ၊ နင်တို့အတွက် […]
Facebookမှာ ဒီreactionလေး ရဖို့
Facebookမှာ ဒီreactionလေး ရဖို့အတွက်Commentတွေမှာ လိုက်မန့်နေတဲ့သူတွေ သိဖို့ ဒီreactionအသစ်က “Care reaction”လို့ ခေါ်ပါတယ်။ မကြာခင် ဖုန်းတိုင်းမှာ ရတော့မှာပါ။ Facebook က စမ်းသပ်နေတုန်းပဲ ရှိသေးတယ်။ တစ်ချို့ဖုန်းတွေကို random ပေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီreactionဟာ Covid-19အတွက် ပေါ်ပေါက်လာတာမို့လို့ အရင်တုန်းက ရခဲ့ဖူးတဲ့ […]
(၂၉-၄-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ နံနက် (၇:၀၀) နာရီ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း
COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း(၂၉-၄-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ နံနက် (၇:၀၀) နာရီ ၁။ (၂၉-၄-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ နံနက်အစောပိုင်းတွင် အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန (ရန်ကုန်) (NHL) မှ (၂၈-၄-၂၀၂၀ ရက် အတွက် ဒုတိယအသုတ်) ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးပြီးစီးခဲ့သော စောင့်ကြည့်လူနာနှင့် အသွားအလာကန့်သတ်ထားရှိသူများ၏ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၂၆၈) ခု၏ […]
ပဌာန်း ရေလမ်း ပန်းလမ်း ဆီမီးလမ်း ဖြင့် ပူဇော်ခြင်း
ရေလမ်း ပန်းလမ်း ဆီမီးလမ်း ပူဇော်နည်း တောင်းထားသူများ ပဌာန်း ရေလမ်း ပန်းလမ်း ဆီမီးလမ်း ဖြင့် ပူဇော်ခြင်း (၁) ရေဖန်ခွက် (၂၄)ခွက် (၂) ဆူးမပါသော ပန်း / ပွင့်ဖတ် များ (၃) ဆီမီးတိုင်၂၄ တိုင် သင့်တော်ရာစားပွဲ(သို့)လင်ဗန်းတွင်ရေဖန်ခွက် ၂၄ […]
ကိုးနဝင်း အဓိဌာန် ပုတီးစိတ်နည်းကိုးနဝင်း မိုးလင်းမှသိမယ်
ကိုးနဝင်း အဓိဌာန် ပုတီးစိတ်နည်းကိုးနဝင်း မိုးလင်းမှသိမယ် ၁။ ဂုဏ်တော်ကိုးပါးဖြင့် လောကီအကျိုးစီးပွားအောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းစေသာ အဓိဌာန် ဖြစ်သည်။ ၂။အဓိဌာန် အဆင့် ၉ ဆင့်ပါရှိပါသည်။ တဆင့်လျှင် (၉)ရက်နှုန်းဖြင့် (၈၁)ရက် ဝင်ရမည့်အဓိဌာန် ဖြစ်ပါသည် ။ တစ်ဆင့်လျင် သင်၏အရေးကြီးဆုံး ကိစ္စတစ်ခုကို ဆုတောင်းနိုင်ပါတယ် ။ ၃။ […]
ကျွန်မ . . . ချစ်ခြင်းနဲ့ပဲ ချည်ခဲ့တာပါ ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မ ချစ်ခြင်းတွေကို နားမလည်ခဲ့တဲ့ လူနဲ့ပဲ ဆုံခဲ့တာကလဲ ကံကြမ္မာပါ ။
April 28, 2020 Tameelay 0
ချစ်ခြင်းဖြင့်သူ ချည်ခဲ့တာပါ ။ လူတစ်ယောက်ကို ချစ်မိလာတာနဲ့အမျှ အနောက်မှာ ပိုင်ဆိုင်ချင်တဲ့ အတ္တတွေ ကပ်ပြီးပါလာတတ်တာ သဘာဝတွေထဲက သဘာဝတစ်ခုပါ ။ ဒီအထဲမှာမှ ပိုပြီး ချစ်မိတဲ့သူ ပိုပြီး အဆုံးရှုံးမခံနိုင်တာက ပိုပြီးသာတာပေါ့ အချစ် . . . ပေးဆပ်ခြင်းလို့ အဓိပ္ပါယ်ဖြစ်ကြတဲ့ သူတွေလဲ […]
ညီမလေး အိမ်ထောင်ပြုဖို့ ဆုံးဖြတ်တော့မယ်ဆိုရင်
စာတတ်တဲ့ယောက်ျားထက် စာနာစိတ်ရှိတဲ့ယောကျ်ားကိုသာရွေးချယ်ပါ တစ်မိုးအောက်ထဲ အတူနေထိုင်မဲ့သူဆိုတာကိုယ့်ခံစားချက်ကို စာနာစိတ်နဲ့ကြည့်မြင်တတ်သူ ဖြစ်နေဖို့သိပ်လိုအပ်တယ် ။ ပညာတတ်သူထက် ကြင်နာစိတ်ရှိသူကိုသာရွေးချယ်ပါ ကိုယ့်ဘဝတစ်သက်တာလုံးအနီးဆုံးမှာရှိနေမဲ့သူဟာကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုကြင်နာတတ်တဲ့စိတ်နဲ့ဖေးမနိုင်သူဖြစ်ဖို့ သိပ်လိုအပ်ပါတယ် ။ ငွေချမ်းသာသူထက် စိတ်ထားရိုးဖြောင့်သူကိုသာရွေးချယ်ပါ ။ ဘဝတစ်လျှောက်လုံး အေးအတူပူအမျှ လက်တွဲထားရမဲ့သူဟာ ကိုယ့်လိုအပ်ချက်တွေကိုငွေနဲ့ဖြည့် ဆည်းပေးနိုင်ရုံနဲ့ မရဘူး ဘယ်အရာမှာမဆို ပွင့်လင်းရိုးသားစွာနဲ့ ဆက်ဆံရေးက သာနှစ်ဦးနှစ်ဖက် […]
“အင်္ဂါ “သားသ္မီးတွေရဲ့အားသာချက်က လူအများက ချစ်ခင်အောင်နေတတ်တာပါပဲ.
“အင်္ဂါ “သားသ္မီးတွေရဲ့အားသာချက်က လူအများက ချစ်ခင်အောင်နေတတ်တာပါပဲ. တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ချစ်မိပြီဆိုရင်လည်း ဘယ်သူမှလိုက်မမှီအောင် ချစ်တတ်ကျတယ်.. ချစ်သူအတွက်ဆိုရင် ကောင်ကင်ကို ဒူးနဲ့တိုက်ရရ သူရဲကောင်းကြီး လုပ်ချင်တာ အဂါၤသာသ္မီးတွေပါ။ ဝမ်းနည်းလွယ်တယ် ၊ မျက်ရည်လွယ်တယ်.. ကီစ္စတစ်ခုကိုတစ်စိမ့်စိမ့်တွေးပြီးတော့.. တမြည့်မြည့် ခံစားနေတတ်ပြန်တယ်.. ဟာသပြောပြီး ပြုံးနေတတ်ပေမယ့်.. ရင်ထဲက ကြိတ်ငိုနေတတ်တယ်.. စိတ်နာအောင်တော့ […]
မိန်းမတစ်ယောက်က ယောကျာ်းတစ်ယောက်ကို အမှန်တကယ်ချစ်တဲ့အတွက်သာ ထိုယောကျာ်းနဲ့တစ်ဘဝသာ ဖြတ်သန်းဖို့အတွက် လက်ထပ်လိုက်ကြတာပါ။ လက်ထပ်လိုက်တဲ့အခါ သူမအပျိုဘဝက ဝတ်ခဲ့တဲ့ ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်ကိုလည်း ချွတ်ချသွားနိုင်ပြီးဖိနပ်ပါးလေးနဲ့လည်း လမ်းကြမ်းကြမ်းမှာ လျှောက်ရဲပါတယ်။ မျက်နှာပြင်မှာ မိတ်ကပ်မရှိ နှုတ်ခမ်းနီလည်းမရှိပဲအဆီတဝင်းဝင်းနဲ့ မီးဖိုချောင်ထဲမှာ တကုပ်ကုပ်အလုပ်ရှုပ်ရင်း သူမရဲ့ယောကျာ်း အိမ်ပြန်လာချိန်ကိုထမင်းဝိုင်းပြင်ပြီး စောင့်မျှော်နေမိပါလိမ့်မယ်။ လက်မထပ်ခင်က အိမ်ကမင်းသမီးတစ်ပါးလို ဖူးဖူးမှုတ်ခံခဲ့ရပြီး ဘာမှမလုပ်တတ်ခဲ့ရင်တောင် […]
လက်ဖဝါးမှာ ‘M’ အက္ခရာရှိသူတွေဟာ တမူထူးခြားနေသူတွေဖြစ်တယ် . . .ဘာလို့လဲဆိုတော့
လက်ဖဝါးရှိ လက္ခဏာကောက်ကြောင်းလေးတွေက မိမိဝိသေသလက္ခဏာနဲ့ ကံကြမ္မာကို ဖော်ညွန်းနေတာလို့ ဆိုကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လက်ဖဝါးမှာ M ပုံသဏ္ဍာန် အက္ခရာစလုံးရှိသူတွေဟာ တမူထူးခြားသူလို့ ဆိုပါတယ်။ အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ ထူးထူးခြားခြား အထုံ ပါရမီ ပါသူ၊ ဝမ်းတွင်း အသိရှိသူ၊ နောက်ပြီး ထူးကဲတဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ လို့လည်း […]
« 1 … 51 52 53 … 64 »
“အပြစ်လည်းမမြင်နဲ့ အပြစ်လည်းမတင်နဲ့တော့ ကြံဖန်သာကျေးဇူးတင်လိုက်”
စေတနာဟာလူတိုင်းနဲ့ မတန်ပါဘူး ဆိုတာ ဟုတ်ရဲ့လား
မယူသင့်တဲ့အရာတွေကို …ယူပြီးသွားရင် မပေးချင်တဲ့အရာတွေကို ပြန်ပြီး ပေးရတတ်တယ်တဲ့ …